Asomafo 10 NA-TWI - Petro ne Kornelio - Ɔbarima bi tenaa - Bible Gateway
Asomafo 9Asomafo 11
Asomafo 10 Nkwa Asem (NA-TWI)
10 Ɔbarima bi tenaa Kaesarea a ne din de Kornelio. Na ɔyɛ Roma asraafo bi a wɔn din de Italia asraafodɔm no so panyin. 2 Na ɔne ne fifo nyinaa yɛ Nyamesurofo. Ɔyɛ obi nso a na ɔboa ahiafo na daa ɔbɔ mpae. 3 Da bi awia bɛyɛ nnɔn abiɛsa no, ohuu Onyankopɔn bɔfo wɔ anisoadehu mu sɛ waba ne nkyɛn abɛfrɛ no se, “Kornelio!”